Norway | Somaliska - Part 2
Dowlada Norway ayaa heshiis cusub oo ay la gashay mucaaradka waxaa lagu sheegay in qaxootiga fasaxa ugu safra wadankii ay ka yimaadeen laga ceshan doono sharciga degaananshaha. Wasaarada cadaalada Norway ayaa sheegtay in qofka...
Iyadoo ay maalmahaan socotay olole laysku wareejinayo kaniisadaha Yuhuuda oo ay sameynayaan dad Muslimiin ah, ayaa hada waxaa bilaabatay in Masaajida laysku wareejiyo. Masaajidka Central Jamaat Ahle Sunnat oo ku yaala magaalada Oslo ayaa shalay...
Muslimiin tiradooda lagu qiyaasay 1000 qof ayaa shalay isku hareereeyay kaniisada Yuhuuda ee ku taala magaalada Oslo. Muslimiinta ayaa sheegay in ujeedada ay tahay in taageero loo muujiyo Yuhuuda ku nool Norway oo ay...
Imaamka masaajid ugu weyn Norway ee ku yaala xaafada Grønland ee Oslo ayaa xalay lagu weeraray faas isagoo dhaawac aad u culus la gaarsiiyay. Imaamka oo da’diisa lagu sheegay 60 sano ayaa ku sii jeeday...
Waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool Norway ayaa caruurtooda u diray wadamada Afrika qaasatan Kenya, Somalia iyo Masar. Ujeedada ka dambaysa arintaan ayay waalidiintu ku sheegeen in ay tahay in heerka waxbarashada ee iskuulada Norway...
Xulufo ay ku mideysan yihiin xisbiyada garabka midig ayaa ku guuleysatay doorashada Norway. Iyadoo raysal wasaaraha talada haya looga adkaaday doorashada. Haweenayda lagu magacaabo Erna Solberg oo hogaamisa xisbiga lagu magacaabo Høyre ayaa la filayaa in ay...
Raysal wasaaraha Norway Jens Stoltenberg ayaa bishii Juun waxa uu go’aansaday in uu ka mid noqdo taksiilayaasha magaalada Oslo. Mr Stoltenberg ayaa taksiile nimo ku shaqeeyay galab isagoo xirtay dharka taksiilayaasha iyo ookiyaale. Sababta uu taksiilaha...
Isbuucaan waxaan soo qoray in magaca nabi Mohammad (nnkh) uu ka midyahay 100 magac ee ugu caansan wadanka Sweden kuwaasoo loo bixiyo wiilasha ku dasha wadankaan. Hadaba waxaa ka sii farxad badan in magaca...
Dowlada Norway ayaa diiday qorshe uu soo bandhigay gudi horay loogu xilsaaray in uu soo baaro qaabkii haweenka Muslimiinta ah ee Xijaabka xirta loogu ogolaan lahaa in ay ka mid noqdaan Booliska. “Dowladu waxay...
Maanta waa sanadguuradii kowaad ee ka soo wareegtay markii nin cadaan argagixiso ah uu bombaano ku qarxiyay xafiiska raysal wasaaraha Norway, ka dibna intuu doon qaatay 69 qof ku dilay jaziirada Utøya ee ku taala...
Dowlada Norway ayaa doonaysa in Soomaalida sharciga loo diiday in ay qasab dib ugu celiyaan Soomaaliya qaasatan Muqdisho iyo deegaanada ku dhow. Isbuuci la soo dhaafay ayaa waxaa shir qarsoodi ah magaalada Muqdisho ku...
Isbuucii hore waxaan soo daabacnay warbixin ku saabsanayd nin Soomaali ah oo nin kale oo Afghanistan u dhashay ku dilay Norway, balse arintaas oo ay qoreen warbaahinta Norway ayaa hada u muuqata in ninka...